Du bist hier: Startseite / Inbaddan oo kamid ah saaxiibadayda waxay daawadaan filimaan galmo ah. Anigu...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2018-03-23 11:26:582018-03-23 11:26:58Inbaddan oo kamid ah saaxiibadayda waxay daawadaan filimaan galmo ah. Anigu waxaan ahay wiil 14-sanno-jir ah waxaana ku raaxaystaa daawashada filimaantaasi. Sidoo kale waxaan jeclahay in aan daawado filimaantaan. Laakiin saaxiibadaydu waxay dhahaan waa in ay ahaato mid sir ah. Oo aanan waxna u sheegin dadka waaweyn. Maxay sidaasi u tahay?